Itheyibhile yeNtaba yeTikiti zeNdleko ze 2022 | Amatikiti eNtaba yeTafile
Itheyibhile yeNtaba yeTikiti zeNdleko ze 2022
👆 Jonga amaxabiso amva nje 2022 (Amatikiti eTafile eNtabeni ngumthengisi wamatikiti anexabiso eliphantsi)
Lingakanani itikiti lokuya kwiNtaba yeTafile?
Intaba yeTafile, ey? Unokuthi nge-toothpick emlonyeni wakho njengoko unyuka iPlatteklip Gorge. “Damn loo ntaba,” abanye basenokuthi njengoko benyuka iminqantsa yelo thambeka lingunaphakade. Abantu abaninzi bayakhangela “Lingakanani itikiti lokuya kwiNtaba yeTafile,” abakhangeli ukuhamba, hayi, bafuna i-Cableway kunye neendleko ezinxulumene nazo. Yiyo i, I-Aerial cable car ibuya inyuka isihla intaba.
Abantu abaninzi, thatha imoto yentambo unyuke usehla intaba. Leyo yeyona ndlela ikhethwayo kakhulu yokukhwela irhamncwa lelitye. Masithi uye wenyuka-inokungaze yenzeke-Ke unokucwangcisela into ebingalindelekanga, kuthekani ngeendledlana ezinyukayo ukuya encotsheni yendlela yeentaba, hayi, abantu abaninzi bathatha imoto yentambo phezulu kunye namatikiti eTafile Mountain, kwaye sizibonelele ngeendleko 2022.
Itikiti leNtaba yeTafile libiza 2022
Njengoko umfanekiso ongezantsi ubonisa, beka intwana yetyuwa kunye nepepile kwi-steak esanda kufakwa, kwaye ufumana iindleko ezihlaziyiweyo ze-Aerial Cableway 2022. Ezi ndleko azinakubhidaniswa nezinga le-ZAR. Amatikiti eNtabeni yeTafile kwiwebhusayithi amaxabiso e-USD kuba - masijongane nayo - iiRandi ziyafunxa.
Nje ukuba iindleko ezingaphezulu ziye zagaywa, thatha umzuzwana uphumle kwaye wazi ukuba zonke ezi ndleko zibandakanya i-Aerial Cableway. Nditsho nokhenketho lwasimahla lweTable Mountain (njengoko kubonelelwe yi-Aerial Cableway), yokutyela, kunye nokufikelela kwikhefi, iindlela zokufikeleleka ngesitulo esinamavili, iimbono, kunye nokubona izilwanyana zasendle.
“Wowu, intle kakhulu, kodwa kuthekani ngabaninzi bethu abafuna ukonga iindleko kwaye baqinisekise ukuba asichithi ngaphezu 0.01 Iidola ngaphezulu kwemfuneko” Ungamazi umntu okanye ubuze. Kulungile, kukho iindaba zakho, kwaye ayiveli kwi-BBC okanye kwesinye isitishi seendaba esenza i-clickbait yobuxoki.
Iindleko ze 2022 kufanelekile; alikho elinye ithuba kuwe eKapa lokubona kwaye wenze izinto ebezingenakwenzeka ngaphandle kwamatikiti eTafile Mountain. Apho ithi, njengoko kubhaliwe ngasentla ngoonobumba begolide kunye nokubhala okuthe ngqo, thenga amatikiti eentaba zetafile kwi-intanethi - ukuba yayingacacanga ngokwaneleyo.
Mhlawumbi, ungomnye waba bantu bacinga ngokubaluleka kwendalo. Kwanokuba ubekho nje kuyo njengesaqhwithi esijikelezayo. Mhlawumbi ngoku lixesha lokuba ucinge ngamatikiti eTable Mountain kwaye uthenge elinye kwi-intanethi njengoko ungalindi isigqibo sakho sokunyamalala ebumnyameni okanye kwindlela ekufutshane yobisi..
Indalo, kwiNtaba yeTafile, yinxalenye ebalulekileyo yohambo, ngaphandle kweembono kunye nokubonwa okuphezulu kweKapa leThemba eliHle kunye neBoulders Beach. Ngelishwa, iimbono zeTable Mountain yeyona ndlela ikufutshane exeliweyo yobisi ayinakwenzeka kuba sifuna iteleskopu enkulu efana neSutherland., kwi.
Uvimba weNdalo kwiNtaba yeTafile ubamba iintlobo zezityalo ezifana nezizwe ezingaqhelekanga zehlabathi, uninzi lwezityalo zale paki zezomthonyama eKoloni. Yintoni egqithisile, akukho bhetri zibandakanyiweyo, kwaye izityalo ezininzi zithatha amandla azo ekukhanyeni kwelanga - ngoko ke, Intshayelelo emfutshane yamatikiti eNtabeni yeTafile.
Ukufumana iindleko ze 2022 inokuba ngumsebenzi onzima; inyaniso, kunokuba nzima kunokunyuka intaba yeTafile. Yiyo loo nto iwebhusayithi ibonelela ngezo ndleko ngeyona ndlela yendalo enokwenzeka, ngeblog ukugcina umdla. I-Table Mountain Tickets Blog inayo yonke into efunwa ngabatyeleli eKapa, njengedesika yolwazi.
Uhlobo lweTikiti lokuBuyisa Iindleko
UkuBuyiswa kwetikiti lakusasa* Umntu omdala Jonga
UkuBuyiswa kwetikiti lakusasa* Umntwana Jonga
UkuBuyiswa kwetikiti emva kwemini* Umntu omdala Jonga
UkuBuyiswa kwetikiti emva kwemini* Umntwana Jonga
UkuBuyiswa kwamatikiti oMhlalaphantsi Jonga
Ezizodwa ze 2022 Jonga
Amatikiti eNdlela enye
Iintlobo zamatikiti eNdlela enye Iindleko
Itikiti lakusasa Indlela enye* Umntu omdala Jonga
Itikiti lakusasa Indlela enye* Umntwana Jonga
Itikiti lasemva kwemini Indlela enye* Umntu omdala Jonga
Itikiti lasemva kwemini leNdlela enye* Umntwana Jonga
Amatikiti adla umhlala-phantsi eNdlela enye Jonga
Ukuthenga amatikiti eTable Mountain kwi-Intanethi kunokuba ngumsebenzi onzima, ifanelekele abo badlamkileyo bexesha ababedlula kwiRoma yamandulo. Okunokwenzeka, wena okanye utatomkhulu nomakhulu wakho animdalanga kangako-umdala ngokwaneleyo ukuba angaphazama ii-smartphones zesetyhula yomnxeba, kodwa akukabi kudala kakhulu ukuba uphose ibhlog ngayo nantoni na engabalulekanga.
Iiblogi ezifana nezi zityebile ngolwazi, izityebi kangangokuba uBill Gates uya kuba nobunzima bokugcina iindleko zamatikiti eTafile Mountain 2022. Yiyo loo nto ezinye iinkcukacha zakho zinikezelwe simahla ngaphandle kwentlawulo. Ubukhulu becala simahla - kwaye iya kuhlala ikhona. Intaba yeTafile enamatikiti ininzi kakhulu usebenzisa ulwazi lwasimahla.
Ukuba ufunde oku kude ngaphandle kokuthenga amatikiti eNtabeni yeTafile, emva koko AMAPHUTHA OMKHULU. Iindleko zamatikiti zinokunyuka nangaliphi na ixesha ukusukela ngoku kude kube ngoku 0.01 millisecond kamva, ekhawulezayo kunexesha elithathayo kwingwenkala yaseMzantsi Afrika, esona silwanyana sikhawulezayo emhlabeni, ukwenza umtsi womoya obhabhayo.
Intaba yeTafile, ngokusisiseko indawo enkulu yokugcina izilwanyana zasendle kunye nolondolozo lwendalo, ibamba i-Aerial Cableway, uyilo lwemixholo enkulu yaseMelika yemoto yentambo ecacileyo. Ithatha emva kwangaphambi kwayo, iCableway eyilelwe ukuthutha abantu abaninzi ukuya kumashumi asixhenxe ngexesha ukuya kwiTable Mountain Reserve.
Ukususela ekufakweni kweCable Car, abanye 20 Kwiminyaka eyadlulayo, iCable Car ibe yenye yeendawo ezithandwa kakhulu ngabakhenkethi eKapa. Ukubona indawo eKapa ngamatikiti eTable Mountain yeyona nto ithandwayo phakathi kwabahlali kunye nabakhenkethi abatyelela eKapa okokuqala, rhoqo ngamatikiti e-e.
Iyacetyiswa ukuba uyeke ukukhangela i-web emnyama yamatikiti eTafile Mountain ngamaxabiso afikelelekayo. Izinto ezithandwayo onokuthi ungaze uzibone, kwaye ungene ekukhanyeni kwiinkonzo zamatikiti athembekileyo. Iwebhusayithi efana nale uyifundayo ngoku yeTable Mountain isiqinisekiso samatikiti ASAP.
Amatikiti eTable Mountain yinkonzo ethembekileyo enamakhadi adityanisiweyo kwiAerial Cableway ngamaxabiso afikelelekayo., Ixabiso ngeUSD - Kuba masijongane nayo - iRandi iyanya. Ngubani ofuna enye iChampaign kuba umongameli wathetha into ezindabeni zelizwe eyenza itanki yeRandi yoMzantsi Afrika?
Mhlawumbi akunjalo, mhlawumbi kuphela izinga lolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika liphezulu kakhulu kangangokuba abantu abaninzi bakhetha ukunamathela imali yabo kwiindawo ezimnyama, kumnyama kakhulu ngokokude ungabinako ukuphuma xa umongameli ebuyisa umhlaba. Ngolunye uhlobo, Singacebisa ukuba kuthengwe amatikiti ngoku phambi konyulo lwesizwe olulandelayo- ukhetho lwakho.
HLOLA IITIKITI ZENTABA YETABHILE Iindleko 2022 (COFA APHA)